Nhau - Nyowani vhezheni yekumisikidza matanho ekugadzirisa chinzvimbo muindasitiri nesimbi indasitiri ichaunzwa
Mutori wenhau we "Ruzivo rwehupfumi zuva rega rega" akadzidza kuti iyo nyowani vhezheni ye "Implementation Measure yeKwaniso Yekutsiva muIni neSimbi Indasitiri" yakapedza nhanho dzekukumbira pfungwa nekudzokorora, uye parizvino iri kutevera maitiro ekupedzisira. Izvi zvinoreva kuti sezvo nyika yangu yesimbi yekugadzira chinzvimbo chinogadziriswa uye yekufirita projekiti yakamiswa kwegore nehafu kubvira kutanga kwa2020, iyo simbi yekugadzira chinzvimbo chinzvimbo chinotanga zvakare.
Mumwe ane chiremera akataura kuti kumwe kupokana kwakadzika mumhizha yesimbi hakusati kwagadziriswa. Kugadziriswa kwemasimba inzira yakakosha yekuzadzisa kusanganiswa kwehupenyu hwekurambidzwa kwesimba nyowani uye kugadzirisa kwesimba. Ichabatsira nyika yangu kuita denderedzwa idzva re "de-kugona", kutungamira makambani esimbi enyika yangu kukwidziridzira kuendesa kwakawanda uye kugadzirisa maratidziro ematunhu.
Wen Gang, mutevedzeri wemukuru we Iron and Steel Division yeRaw Materials Dhipatimendi re Ministry of Industry and Information Technology, akadaro pakutanga Beibu Gulf Iron and Steel Development Foramu muna 2021 kuti kunyangwe hazvo mamiriro ekuvandudza eindasitiri yesimbi ari kufadza. , Inofanirawo kucherechedzwa kuti indasitiri yesimbi ine kukamurwa kwakakomba kwesimba rekugadzira uye kuburitsa, uye hwaro hwekudzora kugona hauna kusimba. , Chiyero chesimbi inopinzwa kunze chakanyanya kukura, nezvimwewo, uye kuchengetedzeka kwemaindasitiri kuri panjodzi. Panguva imwecheteyo, kuchine kusagadzikana kwakadzika-gara nematambudziko senge maburi pakati pekuvandudzwa kwebhizimusi uye zvinodiwa zvepamusoro-soro, nekudaro hatigone kuva netariro yekusaona.
Iyi nongedzo nyowani yekutsiva esimbi yekugadzira kugona inovavarira kunyatso tarisa mutsvuku wekusawedzera nyowani yekugadzira kugona. Wen Gang akataura kuti iyo yekutsiva reshiyo yesimbi yekugadzira kugona ichave yakanyanyisa kuomarara. Iyo yakagadziridzwa yekukwanisa kugona kuita matanho anowedzera zvakanyanya kuwedzera nzvimbo, kuwedzera nzvimbo dzakaomarara, uye kuwedzera mimwe mirawo pachiyero chekuvakazve nekuwedzera kwenzvimbo dzakati. Asi panguva imwecheteyo, kuitira kukurudzira mabhizinesi kukurudzira zvakanyanya kubatanidzwa uye kuronga patsva, kurongeka kwakarongeka, kugadzira simbi yemagetsi, uye kuongorora kusimukira kwekomboni-kabhoni tekinoroji, matanho ekumisikidza nenzira kwayo anodzora chiyero chekutsiva, zvichiratidza kusiyana kwakatsigira marongero.
“Kuwedzera huwandu hwegadziriro yekutsiva ndiko kudzikisira kukura kweshure. Mamiriro ehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwekugadzira hunofanira kuona kuti mushure mekuitwa kweprojekti, kugona kwekugadzira kunogona kudzorwa nemazvo, uye hakungavi nekuderedzwa kwemazita uye kuwedzera chaiko kwekuburitsa. Vemukati vakadaro.
Iye munhu ainetsekana akati pamwe nekuvandudzwa kwehukama-hwekuda hukama muindasitiri yesimbi, mutengo wesimbi wakwirazve, uye purofiti yemakambani yakavandudza. Mune dzimwe nzvimbo, kukwezva upofu uye kusaita hanya nemamiriro ezvinhu, simba rekukurumidza kuvhura simbi simbi yekunyungudisa. Maitiro eprojekti manejimendi anoratidza kuti pane kusanzwisisana kwe "kutanga kukwira chitima wozotenga tikiti", kusiya indasitiri yesimbi ichiri panjodzi yekunyanyisa kusvika kune imwe nhanho.
Nechikonzero ichi, matanho ekumisikidza ari pachena, uye zvakanyatsorambidzwa kuwedzera huwandu hwesimbi yekugadzira nzvimbo munzvimbo dzakakosha dzekudzivirira nekushatisa kwemhepo. Matunhu (nzvimbo dzakazvimiririra, matunhu) asina kupedza huwandu hwesimbi yekugadzira kugona kudzora tarisiro haigamuchire simbi yekugadzira simbi inoendeswa kubva kune mamwe matunhu. Iyo Yangtze Rwizi Economic Belt dunhu inorambidza nyowani kana kuwedzerwa simbi yekunyungudza mapurojekiti kunze kwenzvimbo yekuteerera.
Panguva imwecheteyo, Wen Gang akataura kuti gore rino richashanda pamwe neDevelopment and Reform Commission nemamwe madhipatimendi akakodzera kuronga "kutarisa kumashure" kuongororwa kwesimbi kuderedzwa uye kudzikiswa kwesimbi isina kubikwa, uye kutungamira makambani esimbi kusiya yakakura nzira yekuvandudza yekukunda nehuwandu, uye nekunyatso simbisa kushanda kwekudzikisira musimba. .
Izvi zvisati zvaitika, National Development and Reform Commission uye Ministry of Industry and Information Technology vakaita hurongwa hweku "kutarisa kumashure" pakuderedzwa kwesimbi yesimbi muna 2021 uye kudzikiswa kwesimbi isina kucherwa. Iwo mahushumiri maviri nemakomisheni anozotarisa pakuongorora kudzima uye kubvisa michina yekunyungudutsa ine chekuita nekugadzirisa huwandu hwesimbi yekugadzira kugona uye kupwanya "simbi yemuno". Panguva imwecheteyo, kutariswa kwakazara kwekabhoni, kusarerekera kwekabhoni uye nongedzo dzenguva refu, zvichitarisa pakuderedza simbi isina kuchena inobuda mumakambani ane kusashanda zvakanaka kwezvakatipoteredza, simba rakawanda rekushandisa, uye nematanho ekudzokera kumashure ehunyanzvi, kudzivirira "saizi imwe inokodzera zvese ”, uye nekuona kuti simbi isina kuchena yenyika ichawanikwa muna 2021. Zvakabuda zvakadonha gore-gore.
Zhang Longqiang, purezidhendi weMetallurgical Industry Information Standards Research Institute, akati kumatunhu, zvakakosha kushandisa matanho ekutsiva, kuwedzera huwandu hwenzvimbo dzekudzora-refu, kusimbisa zvakatemwa zvinorambidza kugona kwekugadzira kwesimbi, uye kuongorora zvakanyanya uye kugadzirisa kutyorwa kwemitemo nemirau. Panguva imwecheteyo, nekuvandudza kwesainzi kugoverwa kwemauto anoburitsa, chinoshamisa che "North-South Transport of Steel" chinoshandurwa nemazvo. Akaratidza kuti mudunhu reBeijing-Tianjin-Hebei, iyo yakareba-yekugadzira simbi yekugadzira inokwanisa kudzikiswa; tarisa paBeijing-Tianjin-Hebei nenzvimbo dzakatenderedza, iyo Yangtze Rwizi Delta, nedzimwe nzvimbo dzine hunyanzvi hwekugadzira kwenguva refu nenzvimbo dzakakosha dzezvakatipoteredza, uye kurongeka zvine musoro uye kusimudzira kwesimbi-yekugadzira simbi.
Luo Tiejun, mutevedzeri wasachigaro weChina Iron and Steel Association, akataura kuti kukura kuri kuenderera kwekugadzirwa kwesimbi kwenyika yangu kunotungamirwa nechinodiwa kwakatsigira kusimudzira hupfumi hwenyika. Nekudaro, mukufamba kwenguva, pamwe nekushandurwa kwehurongwa hwekukura kwehupfumi hwenyika yangu, iyo "isina kujairika" mamiriro ekushandisa simbi gore rapfuura uye nguva iripoyi yakaoma kusimudzira.
Luo Tiejun akataura kuti muganho wekugadzira unofanirwa kuchengetwa uchimanikidzwa, uye hapana "saizi imwe inokodzera zvese". Isu tinofanirwa kutarisa kudzikamisa kuburitswa kwezvinhu zvisiri pamutemo zvinowedzerwa uye zvisiri-zvakajairika zvinokwanisa kutsiva mapurojekiti kubvira 2016; kudzikisira kuburitsa kweasina kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye asiri emhando mabhizinesi; kudzikamisa kuburitswa kwesimbi yenguruve kudzikamisa kuburitswa kwesimbi isina kuchena. Kune mabhizinesi anosvika kune yakaderera-yakaderera emission A-nhanho uye yemagetsi choto pfupi-nzira yesimbi inogadzira mabhizimusi, panofanirwa kunge paine mashoma kana kusarambidzwa, asi akataura zvakare izvo zvinonzi zvisingagumi hazvizare-kutakura kugadzirwa, uye kubuda kwe aya mabhizinesi haafanirewo kuwedzera gore-pagore.